Ny loharanom-baovao lehibe dia eny rehetra eny, fa ny fampiasana azy ireo amin'ny fikarohana ara-tsosialy dia mety ho sarotra. Raha ny zavatra niainako, misy zavatra iray toy ny "tsy misy sakafo maimaim-poana" momba ny angon-drakitra: raha tsy mametraka asa be dia be ny manangona azy, dia mety ho voatery hitafy asa be dia be ny mieritreritra izany analyse it.
Ireo loharanom-baovao lehibe anio-ary angamba rahampitso-dia mety hanana toetra 10. Ny telo amin'izy ireo dia amin'ny ankapobeny (fa tsy matetika) manampy amin'ny fikarohana: lehibe, mitohy ary tsy mavitrika. Ny fito dia amin'ny ankapobeny (saingy tsy voatery foana) ho an'ny fikarohana: tsy feno, tsy azo idirana, tsy miangatra, manodinkodina, algorithmika manala baraka, maloto ary mahatsiaro. Maro amin'ireo karazam-pitsaràna ireo no miseho satria ny loharanom-baovao lehibe dia tsy noforonina ho an'ny tanjona ara-tsosialy.
Mifototra amin'ireo hevitra ato amin'ity toko ity, mieritreritra aho fa misy fomba telo lehibe ahafahan'ny loharanom-baovao lehibe indrindra ho an'ny fikarohana ara-tsosialy. Voalohany, afaka mamela ireo mpikaroka hanapa-kevitra izy ireo hifaninana amin'ny faminaniana ny teôria. Ohatra amin'izany karazana asa izany ny Farber (2015) (mpamily Taxi New York) sy King, Pan, and Roberts (2013) (sivana any Shina). Faharoa, loharanom-baovaon-drakitra lehibe dia afaka mamela ny fepetra hentitra amin'ny politika amin'ny alàlan'ny famoronana. Ohatra iray amin'izany karazana asa izany i Ginsberg et al. (2009) (Google Flu Trends). Farany, ireo loharanom-baovao lehibe dia afaka manampy ireo mpikaroka hanao tombana amin'ny fitomboana raha tsy mitantana fanandramana. Ohatra amin'izany karazana asa izany ny Mas and Moretti (2009) (vokatry ny vokatra eo amin'ny famokarana) sy Einav et al. (2015) (vokatry ny fanombohana ny vidin'ny varotra amin'ny eBay). Ny tsirairay amin'ireo fomba ireo anefa dia mitaky ny mpikaroka mba hampakatra betsaka ny angon-drakitra, toy ny famaritana ny habetsa izay manan-danja mba hamaritana ireo teoria roa na roa mifanaraka amin'ny filazana mifanesy. Araka izany, mihevitra aho fa ny fomba tsara indrindra hieritreretana momba ny loharanom-baovao lehibe dia afaka manampy ireo mpikaroka izay afaka mangataka fanontaniana mahaliana sy manan-danja.
Eo am-pamaranana, mihevitra aho fa ilaina ny mandinika fa mety hisy fiantraikany manan-danja eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny data sy ny teoria ny loharanom-baovao lehibe. Hatreto, ity toko ity dia naka ny fomba fijerin'ny fikarohana ara-tsosialy mifototra amin'ny teoria. Fa loharanom-baovao maro ihany koa no ahafahan'ny mpikaroka manosika ny teoria . Izany hoe, amin'ny alàlan'ny fanangonana fitarihana be loatra ny zava-misy, ny lamina ary ny piozila, ireo mpikaroka dia afaka manangana teoria vaovao. Io fomba fijery hafa io dia tsy vaovao amin'ny voalohany, ary ny ankamaroany dia voatanisa amin'ny Barney Glaser sy Anselm Strauss (1967) miaraka amin'ny antso an-tariby ho an'ny teoria . Io fomba fijery voalohany io, na izany aza, dia tsy midika hoe "ny faran'ny teoria", araka ny voalazan'ny fanaovan-gazety sasantsasany momba ny fikarohana amin'ny vanim-potoana nomerika (Anderson 2008) . Raha miova kosa ny fiovaovan'ny tontolo iainana, dia tokony hanantena ny fanarenana ny fifandraisana eo amin'ny data sy ny teoria isika. Ao amin'ny tontolo iray izay lafo ny fanangonana angon-drakitra, mahatsikaiky ny fanangonam-bola fotsiny ny angon-drakitra ampiasain'ny teoria fa ny tena ilaina indrindra. Saingy, ao anatin'izao tontolo izao izay misy tahiry be dia be ny maimaimpoana maimaim-poana, ilaina ihany koa ny manandramana fomba fanao voalohany (Goldberg 2015) .
Araka ny asehoko ato amin'ity toko ity dia afaka mianatra zavatra maro ny mpikaroka amin'ny fijerena ny olona. Ao amin'ireo toko telo manaraka dia hamaritra ny fomba ahafahantsika mianatra zavatra bebe kokoa sy hafa isika raha mamintina ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra isika ary mifandray amin'ny olona mivantana amin'ny fanontaniany fanontaniana (fizarana 3), fanandramana mihazakazaka (toko 4), ary mampiditra azy ireo mihitsy aza ao amin'ny dingana fikarohana (toko 5).